မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၂)
မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၂)
Posted by aye.kk on Jun 17, 2012 in My Dear Diary | 20 comments
ကျ မ လည်း အ လို လို နေ ရင်း ပင် ၀မ်း နည်း လာ ပြီး ငို ချင် လာ မိ ခဲ့ ပါ သည် ။
ဦး က ကျ မ အား နေ ကာ မျက် မှန် ပါ လား ဟု မေး ပြီး ၊ အ တူ တူ ဖြစ် သွား ရ အောင် ဟု ပြော ဆို ခါ မျက် မှန် တတ် ခိုင်း လိုက် ပါ သည် ။
ဓါတ် ပုံ ဆ ရာ က ကျ မ အား အ တင်း ရယ် ခိုင်း ရာ ဦး က လည်း သ္မီး ရယ် ပါ ဟု ဆို ၍ အ တင်း ရယ် ခိုင်း ခဲ့ သ ဖြင့် ၊ ဓါတ် ပုံ ဆ ရာ က ။ ကျ မ ပြုံး ရယ် မိ တုန်း ။ ပါး ချိုင့် လေး ပေါ် သွား လျှင် ။ အ မိ အ ရ ဖမ်း ယူ ရိုက် လိုက် ပါ သည် ။
ဓါတ် ပုံ ထွက် လာ သော အ ခါ ၊ ဦး က သ္မီး ရယ် လိုက် လို့ သာ ၊ နေ ကာ မျက် မှန် အောက် က ပါး ချိုင့် လေး နှင့် ပို ချစ် စ ရာ ကောင်း သွား သည် ဟု ပြော ပါ သည် ။ ဓါတ် ပုံ ဆ ရာ က နှစ် ဦး လုံး နေ ကာ မျက် မှန် များ နှင့် ဇီး
ကွ က် ကို အား ကြ လို့ လား ဟု စ နောက် ပါ သေး သည် ။ ဦး က သ င်္ဘော တက် လျှင် အ လွမ်း ပြေ သ္မီး ဓါတ် ပုံ ကြည့် မည် ဟု ပြော ပြ ပါ သည် ။
အ ပြန် တွင် ရေ လည် ဘု ရား ဖူး ရန် ကူး တို့ဆိပ် မှ စက် လှေ အား စီး လုံး ငှား ထား သ ဖြင့် မြစ် ပြင် အ လှ အား လှည့် ပတ် ၍ ပြ ပါ သည် ။ ကျ မ က မြစ် ပြင် မှ ရေ အား လက် ဖြင့် ပက် ၍ လှမ်း ဆော့ လျှင် ဦး က
ပင် လယ် နှင့် နီး သ ဖြင့် ငါး ကြီး တွေ ၀င် ရောက် တတ် ကြောင်း ၊ ငါး မန်း များ လည်း ရှိ နိုင် ကြောင်း လက် ချောင်း လေး တွေ ငါး တွတ် ထိုး ပြီး စား မိ သွား နိုင် ကြောင်း ၊ အန္တ ရယ် ရှိ ကြောင်း စိတ် ပူ ကာ ပြော ဆို ပါ သည်။
နောင် အ ခါ တွင် လည်း မှတ် ထား နိုင် ရန် ဟု ဆို ပြီး ပြော ပြ ပါ တော့ သည်။ အ ပြန် ခ ရီး တ လျှောက် တွင် ၊ အစ် မ မ ကြီး ကျယ် အ တွက် စိတ် ထိ ခိုက် ခံ စား ၀မ်း နည်း နေ မှု အား ထုတ် ဖော် ပြော ပြ ပါ သည် ။
ကျ မ မှ လည်း ဦး ကို သ နား သွား ခဲ့ မိ သ ဖြင့် ၊ သ္မီး ကြီး လာ ရင် ဦး ကို ယူ မည် ဟု မ သိ နား လည် စိတ် ဖြင့် ပြော လျှင် ဦး က ရယ် ပါ တော့ သည် ။ အစ် မ မ ကြီး ကျယ် မ ယူ ပါ က ဦး အား သ နား သ ဖြင့် ပြော လိုက် ခြင်း ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။ ကိုယ် ပြော သော စ ကား ကို၊ ကိုယ် နား မ လည် ပါ ပဲ ပြော လိုက် မိ ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ သည်။ ဦး က အစ် မ ကြီး ကျယ် အား အ လွန် ပင် ချစ် ကြောင်း ၊ ချော ၍ ချစ် သည် ဆို ပါ က မ မှန် ကြောင်း ၊ ရုပ် ရည် က ပြုတ် စား ၍ မ ရ ဟု ပြော ပါ သည် ။ အစ် မ မ ကြီး ကျယ် မှာ သာ မာ န် သူ များ ထက် အ ရပ် ပို မို မြင့် နေ သ ဖြင့် ဦး က လိုက် မှီ အောင် ကု လား မ ခြေ ထောက် ၀ယ် တတ် ၍ ရ လျှင် တောင် တတ် ထား ခြင် သည် ဟု ဦး က ပြော ပြ ပါ သည် ။
အဲ လို ဆို ရင် ……..
ဦး က ကု လား မ ချေ ထောက် ကြီး တတ် ထား မှ တော့ “မုံး စ ရာ ကောင်း တဲ့ ဦး”ဖြစ် သွား မှာ ပေါ့ ဟု ပြော ဆို မိ ပါ သည် ။
အဲ လောက် ချစ် နေ ရင် လည်း သ္မီး အစ် မ ကို ဘယ် သူ နဲ့မှ သ ဘော မ တူ ဘူး ။ ဦး က လွဲ ရင် လည်း ဘယ် သူ နဲ့မှ မ ပေး စား ဘူး ၊ ယူ တဲ့ သူ ကို လည်း မ ယူ အောင် တား မှာ ပဲ ဟု ၊ တာ ၀န် ယူ သည့် စ ကား မျိုး ဖြင့် ဦး အား နှစ် သိမ့် ပေး မိ ပါ တော့ သည်။
ဦး လည်း အစ် မ မ ကြီး ကျယ် အ ကြောင်း ပြော ပြီး စိတ် ထိ ခိုက် သွား ပါ သည် ။ ပြီး လျှင် သူ ငယ် ချင်း ပိုက် လော့ တစ် ဦး လည်း ဆုံး ၊ အ လွန် ခင် မင် ရင်း နှီး ရ သည့် မိတ် ဆွေ ကောင်း ဖြစ် သူ နိုင် ငံ ကျော် စာ ရေး ဆ ရာ မ ဒေါ် ၀င်း မြင့် နှင့် မြေး ဖြစ် သူ ဖိုး ခွား တို့အ ပါ အ ၀င် တစ် ပြိုင် တည်း ဆုံး ပါး သွား ကြ သ ဖြင့် စိတ် ထဲ နာ ကျင် ကြေ ကွဲ ခံ စား ရ မှု ၊ မ နက် အိမ် က ထွက် လာ က တည်း က ၊ စိတ် လေး နေ မှု တို့အား ရင် ဖွင့် ပြော ပြ ယင်း နှင့် ပင် ။ အိမ် ပြန် ရောက် လာ ခဲ့ ကြ ပါ သည်။
ဦး က ဒီ နေ့တော့ အိမ် ပြန် နား မည် ဟု ပြော ကာ ပြန် သွား လိုက် ပါ သည် ။
နောက် မ နက် တွင် တော့ ပေါက် ချ လာ ပြီး ၊ သ မ္မ တ ရုပ် ရှင် ရုံ ကြီး တွင် ရို မီ ရို နှင့် ဂျူး လီး ယက် တို့ရုံ တင် သည် ကြို တင် မှာ ယူ ၀ယ် လာ ခဲ့ ရ သည် ။ ကြည့် မှာ လား ဟု မေး လျှင် အစ် မ မ ကြီး ကျယ် က ခ လေး လက် မှတ် အ တွက် ပါ လား ဟု မေး လျှင် မ ပါ လျှင် လိုက် မှာ မှ မ ဟုတ် တာ သိ ပြီး သား ပဲ ဟု ဆို လျှင် ….
ကျ မ က လည်း ဦး က လုပ် ချ ပြန် ပြီး ကု လား မ ခြေ ထောက် ကြီး တတ် မည့် ဦး က…
“မုန်း စ ရာ ကောင်း တဲ့ ဦး” ပါ ပဲ နော် …။
အ ခု လည်း ကြည့် ပါ ဦး…။
သ္မီး ကို စေ တ နာ ရှိ ၍ မ ဟုတ်…။
အစ် မ မ ကြီး ကျယ် မ လိုက် မှာ စိုး ၍ ၀ယ် လာ သည် မ ဟုတ် လား ဟု ဦး ကို ပြော မိ ပါ သည် ။
ဦး…က ၊ တ ကယ် “မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး ” ပဲ ဟု ၊ ကျ မ က ဆို မိ ပြန် ပါ သည် ။
အစ် မ မ ကြီး ကျယ် က …
က လေး ဘဲ ရှိ သေး တယ် ၊ ပြန် ပြော တတ် နေ ပြီ ဟု ဆို ခါ…
ကျ မ အား မျက် စောင်း တ ချက် ခဲ ၍…..
စ ကား နာ ထိုး မ နေ နဲ့ဟု ပြော ပါ တော့ သည် ။
ထို အ ခါ ဦး က လည်း ခ လေး ပဲ ဘာ နား လည် မှာ လည်း ဟု စ ကား စ ဖြတ် ပစ် ၍ ရုပ် ရှင် မ မှီ မှာ စိုး သည် ဟု ဦး က ပြော လျှက် သွား ရ အောင် ဟု ဆို သ ဖြင့် ရုပ် ရှင် ရုံ သို့( ၃) ယောက် သား ၊ ကား လေး ဖြင့် သွား ခဲ့ ကြ ပါ တော့ သည် ။
ရုပ် ရှင် ရုံ ရောက် လျှင်…
ရုပ် ရှင် ကြည့် နေ စဉ် ကွာ စေ့ ၊ နေ ကြာ စေ့ စား ရ အောင် ဟု ပြော ခါ ကျ မ အား မျက် စေ့ တ ဘက် မှိတ် ပြ လျှက် လိုက် ခဲ့ ရန် အ မူ အ ယာ လုပ် ပြ ပြီး ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် အား ခေါ်သွား ချင် သည် ဟု ပြော ခါ ခွင့် တောင်း ပြီး ခ လေး ကြိုက် တဲ့ မုန့်ဝယ် စား နိုင် ဘို့ ဟု ဆို ပြီး ပြော ပြ ခါ ၊ ကျ မ လက် ကို ဆွဲ ၍ ဦး က ခေါ် ထုတ် သွား ခဲ့ ပါ သည်။
အစ် မ က လည်း ရေ အိမ် ခ ဏ သွား တက် ပါ သည် ။ ဘာ မှ တော့ မ ဟုတ် ။ အ လှ တ အား ကြိုက် ခါ ။ မိတ် ကပ် ဖုံး တတ် သည့် အစ် မ ကြီး ကျယ် ၏ အ ကျင့် ကို ။ ကျ မ က ကောင်း စွာ သိ ထား ပါ သည် ။
အစ် မ ကြီး ကျယ် က ။ ချွေး လည်း တ အား ထွက် တတ် သူ ဖြစ် ၍ ။၊ မျက် နှာ ချေ တို့ပတ် အ မြဲ ဆောင် ထား ရ သူ လည်း ဖြစ် ပါ သည် ။ ဦး က အစ် မ ကြီး ကျယ် အ လစ် ကို ချောင်း နေ ပါ သည် ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် နဲ့ကျ မ တို့ ။ နဲ နဲ မ လှမ်း တ ကမ်း ဝေး သွား သည့် နေ ရာ အ ရောက် တွင် ။ ဦး….က ။ ကျ မ အ နား သို့ပြေး ကပ် ပြီး ။ ပါး လေး နား ကပ် ခါ ။ လက် က လေး အုပ် ၍ ။ တိုး တိုး လေး ပြော ဆို ခါ ။ တိုင် ပင် ရိုက် ပါ သည် ။
ကျ မ က လည်း ….ဦး ၏ ဆ န္ဒ အား သိ လိုက် ရ လျှင် ။
“ဟင်” ဟု …နှုတ် မှ လွှတ် က နဲ ထွက် သွား မိ ရ ခါ ။
ဦး က လည်း “မုန်း စ ရာ ကောင်း တဲ့ ဦး” ပဲ ဟု ပြော လိုက် မိ ပါ သည် ။
ရုပ် ရှင် ကြည့် စဉ် အစ် မ ကြီး ကျယ် ၏ လက် က လေး ကိုင် ခွင့် ရ ရေး အ တွက် ။ ကျ မ နှင့် နှစ် ကိုယ့် တ စိတ် လုပ် ခါ ဥာဏ် ဆင် ပြီး နေ ကြာ စေ့ အား လှမ်း ယူ လျှင် ။ ကျ မ လက် နှိုက် သည့် အ ခါ ဦး က သူ့လက် ဖြင့် လှမ်း နှိုက် ယူ ပြီး ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် ၏ လက် က လေး အား ကိုင် ခွင့် ရ နိုင် ရေး ။ ကြို တင် တိုင် ပင် ကိုက် ထား သည့် အ တိုင်း လုပ် ဆောင် ရန် ။ ညှိ နှိုင်း တိုင် ပင် ကိုက် ထား မှု ပဲ ဖြစ် ပါ တော့ သည်။
အစ် မ ကြီး ကျယ် က တော့ တိုင် ပင် ယူ ထား ကြ လိမ့် မည် ကို မ ရိပ် စား မိ ပါ။
အ ထူး တန်း ခုံ လက် မှတ် ဖြစ် ဤ အဲ ယား ကွန်း က အား ကောင်း လှ စွာ အေး စိမ့် ၍ နေ ပါ သည်။ ဦး က လည်း အစ် မ ကြီး ကျယ် အား ချွေး ထွက် သန် ၍ အ ထူး တန်း အ ကောင်း ဆုံး ထိုင် ခုံ နေ ရာ လက် မှတ် များ အား ဖြတ် ထား ပေး ခြင်း ဖြစ် သည် ဟု ပြော ပြ ပါ သည်။
ရုပ် ရှင် ကြည့် နေ စဉ် ဦး က မြန် မာ လို ပြန် ပြော ပြ လိုက် လုပ် နေ လျှင် ၊ ကျ မ က အ ဖေ ၀ယ် ထား ပေး သည့် ရှိတ် စ ပီး ယား ရေး သား ထား သည့် က မ္ဘာ ကျော် ပုံ ပြင် ၀ ထ္ထု အား ဖတ် ဘူး ထား သည့် အ တွက် ၊ ဘာ သာ ပြန် စာ ရေး သူ က တော် လွန်း သ ဖြင့် မူ ရင်း အ တိုင်း တ ခွန်း မ ကြံ ဇတ် ၀င် ခန်း တို့ အား ကြို တင် ကာ ပင် စီ ကာ ပတ် ကုံး ပြော ပြ နိုင် ခဲ့ သ ဖြင့် ၊ ဦး က…… ကျ မ အား လက် ဖျား ခါ လျှက် ။ သ္မီးက အ ရမ်း တော် သည် ဟု ပြော ပြီး ချီး မွမ်း ထော ပ နာ ပြု ပါ လိုက် သည် ။
အစ် မ ကြီး ကျယ် က ။ ဦှး ဖက် သို့ မျက် နှာ တစ် ချက် လှမ်း ကြည့် လိုက် ရင်း ။
သူ က မှတ် တတ် တဲ့ ဥာဏ် အား ကောင်း သည် ။ စိတ် ၀င် စား တာ လည်း ပါ မည် ဟု ဦး ကို ပြော ပြ ပါ သည်။
ပုံ ပြင် တွေ ကို ကျ မ က တော့ စိတ် မ ၀င် စား ဘူး ။ ကိုင် ရို လ က္ခ ဏာ ဘာ သာ ရပ် သာ ကို ပဲ တ စိုက် မတ် မတ် စိတ် ၀င် စား သည် ဟု ဆို ခါ ဦး ကို ရှင်း ပြ ပြော ဆို ပါ သည် ။ ကျ မ ထိုင် ခုံ လက် တင် သည့် နေ ရာ တွင် ဦး က သူ့လက် ကို တင် ထား ယင်း နှင့် နေ ကြာ စေ့ ယူ စား ပါ သည် ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် က လည်း နေ ကြာ စေ့ ယူ စား လျှင် လက် ခြင်း ဆုံ ပြီး ထိ မိ ကြ ပါ သည် ။
ကျ မ က သူ တို့နှစ် ယောက် အ ကြား တွင် ပေး ထိုင် ထား သ ဖြင့် ၊ ဦး က ကျ မ ပု ခုံး နှင့် တိုး ဖိ ကပ် လျှက် အစ် မ ကြီး ကျယ် ၏ လက် က လေး အား ကိုင် ခွင့် ရ ရန် ကြိုး စား နေ ပါ သည်။ ရုပ် ရှင် က လည်း မြင် ကွင်း ကျယ် ဆေး ရောင် စုံ (နိုင် ငံ ခြား) မှ တင် သွင်း သော ဇတ် ကား ကောင်း ဖြစ် နေ ၍ အစ် မ ကြီး ကျယ် က သ တိ မ မူ မိ ပါ..။
နောက် တော့ အစ် မ က နေ ကြာ စေ့ နှိုက် စား တိုင်း လက် ခြင်း ထိ ဆုံ နေ သ ဖြင့်စိတ် တို လာ ပါ သည် ။ ကိုယ့် ခုံ ကိုယ် ပုံ စား ကြ တော့ ဟု ပြော ခါ ဦး ထံ မှ နေ ကြာ စေ့ ထုတ် အား ပေး ရန် တောင်း ယူ ပါ သည်။
အစ် မ မ ကြီး ကျယ် အား….။
လက် က လေး ထိ တာ တောင် ။ ကပ် စေး နဲ နေ ရ သ လား ဟု ပြော တော့ မှ ပင် ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် က ။ တည့် တည့် ကြီး ရိပ် မိ သွား ပါ တော့ သည် ။
ကျ မ အား လည်း ။ တစ် စိမ်း ဖက် က နေ အ လို တူ အ လို ပါ ဟု ပြော ပါ တော့ သည် ။
အစ် မ ရင်း ဖက် က တော့ မ ပါ ၊ တ စိမ်း ဖက် ပါ သည် ။
ကျား ကြောက် လို့ရှင် ကြီး ကိုး…။ရှင် ကြီး ကျား ထက် ဆိုး ဟု ပြော ခါ အ ပြစ် တင် ပါ တော့ သည်။
ထို နေ့က လည်း အ ကြောင်း မ ရှိ ၊ အ ကြောင်း ရှာ ပြီး စိတ် ကောက် သူ က အစ် မ မ ကြီး ကျယ် ပင် ဖြစ် တော့ သည် ။
စေ့ စပ် လက် ထပ် ရေး ကိစ္စ က မ ဖြစ် ၊ နောက် တ ခေါက် သ င်္ဘော က ပြန် လာ မှ သာ ထပ် မံ ကြိုး စား မည် ဟု ဦး က အ ဖေ့ အား ဆို ပါ တော့ သည်။။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီ။ အပိုင်း-၃ ကိုမျှော်နေမှာမို့ မြန်မြန်လေးနော်။
တင် လိုက် ပြီ နော်။။
ကောင်မလေး(ကလေးမလေး)က ကလေးအရွယ်ဆိုတော့ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟင်
ဒါဆို ဦးလေးဆိုသူကတော့ ၂၅ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမှာပေ့ါနော်
ပန်ပန်က တခါတလေ ဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့အသက်ကို မှန်းတာက အကျင့်ဖြစ်နေလို့ပါ
ဒါမှ ဇာတ်ကောင်က သူဘယ်လိုတွေးလဲ၊ ဘယ်လိုစရိုက်လဲလို့ ထပ်တွေးလို့လွယ်တာကိုး
ပြီးတော့ ခုဇာတ်လမ်းမှာလည်း အသက်အရွယ်လေးကိုပါ ထည့်ရေးထားလို့ ပိုသိချင်သွားလို့ပါ
သြော်…………….. အရီးလတ်က ဒီမှာ အသက်ပြောပြထားတာပဲ။ ငြိမ်းက မသိဘဲ အပိုင်း(၁) မှာ မေးထားသေးတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေး ပြတ်သွားမှာစိုးလို့ အပိုင်း(၃) ကိုအရင်သွားလိုက်ဦးမယ် အရီးလတ်ရေ…………………..
အန်တီအေးရေ တောင်းပန်ပါတယ်။ အရီးလတ်ရဲ့ online petition နဲ့ ဟိုဘက်ကူး ဒီဘက်ကူးနဲ့ဆိုတော့ နာမည်မှားသွားတယ်။ တောင်းပန်ပါတယ်နော်………………
အရီးလတ် ကတော့ အဲဒီ အသက်မှာ မိန်းကလေးကျောင်း မှာ ယောကျာင်္းပုံစံဖမ်းပြီး မိန်းကလေး တွေ ကိုဘဲ စိတ်ဝင်စားပါ၏။ ;-)
အရီးလတ်ရေ………. ၀ါသနာချင်းတူတယ်ပဲပြောရမလား။ ဟဲဟဲ…….. မိန်းကလေးတွေကကို လိုက်နေတော့ ခက်တာပဲ။ (မိန်းကလေးမှန်းသိသော်လည်းပေါ့။ )
မနေ့က အပိုင်း ၁ မှာ အသက် ဘယ်လောက် လဲ မှန်း ဆိုတာ တက်မသွားပဲ ဖြစ်နေလို့ ဒီမနက် နိပ်လိုက်မှ တက်သွားတယ်။
ဒီမှာက ဖြေပြီးနေပြီ။ နောက်ကျသွားတယ်။
ကျုပ်အတွက်တော့ “ အားကျစရာကောင်းတဲ့ ဦး ပါဘဲ ”
အဲဒီ ဦးလေးက နဖောင် မပြူးဘူး ဆိုလား.. ဟဲဟဲ
အူးပေ့ နဖူးက ကျယ်ပြန့်တာကွဲ့။
ကြည့်ရတာတော့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလို အပိုင်းတွေ များမယ့်ပုံပေါ်တယ်။
အမကလည်း အလှပဂေးဆိုတော့ အတော်လေး ကို မာနကြီးတယ်နော်။
အန်တီအေးရေ .. ဒုတိယပိုင်းဖတ်ပြီးတော့လည်း … ဇာတ်လမ်းက .. တတိယပိုင်းကို ကူးသွားပြန်တယ် .. သိချင်ဇောနဲ့ တထိုင်တည်း လိုက်ဖတ်ဦးမယ် … ။
ဒါနဲ့ အန်တီရေ …. ကောင်မလေးက ၁၁ နှစ်ဆိုတော့ စကောစက အရွယ်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်နော် ။
ရှေးခေတ်က မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ … လူကြီးဆန်ကြသလားလို့လေ …. ။ လူဖြစ်မြန်တာကတော့ ဒီခေတ်ပေမယ့် … လူကြီးဆန်တာတော့ .. အရင်ခေတ်ကမြန်တယ်လို့မြင်မိပါတယ် … ။အဖွားတွေ ခေတ်တုန်းကတော့ .. ဆယ့်လေးနှစ် ဆယ့်ငါးနှစ်ဆို ..ယောကျာ်းပေးစားနေကြပြီမို့လို့ပါ ။
တတိယပိုင်းကို ပြေးပါပြီ .. ဟီး
စိတ်ကမရဲပဲ ချစ်တော့အလွန်အကျွံ စိတ်ကူးနဲ့ ရူးရုံပေါ့ကွယ်….
ဇာတ်လမ်းက ကောင်းလာပြီ ဒါနဲ့ပဲ အပိုင်း (3) ကို တစ်ခါတည်း
တန်းပြီးကူးလိုက်တော့မယ် အန်တီအေးရေ …